Galaxy A01, Samsung-dhamaadka-hoose hore ayaa magac u leh | Androidsis
Mid ka mid ah caqabadaha ugu muhiimsan ee shirkadaha tikniyoolajiyadda waaweyn, Apple dhinac, waa inuu awood u yeesho inuu xakameeyo suuqa dhammaan noocyadiisa kala duwan. Gaar ahaan tixgelinta taas adduunka casriga ah, shirkado cusub ayaa dhasha daqiiqad kasta oo awood u leh inay bixiyaan waxyaabo badan oo aad u yar. Qeybta gelitaanka ee nidaamka deegaanka ee Android waxay muhiim u tahay ama uga muhiimsan tahay faa iidooyinka shirkadda inta ugu badan. IYO tartanka ka jira heerka soo-gelinta taleefannada casriga ah ayaa sii kordhaya.
Ka warqabo, sanadba sanadka ka dambeeya waxaan ka shaqeyneynaa inaan soo bandhigno shey leh saxiix la aqoonsan karo, taasna markooda kula tartami karaa qiimaha iyo waxqabadka shirkadaha ugu hal-abuurka badan. Samsung marwalba way joogtay tan iyo markii la aasaasay dhamaan baaxada terminal-ka suurtagalka ah. Laga soo bilaabo tan aasaasiga ah iyo tan dhaqaale ee ugu awoodda badan uguna gaar ah. Tani waa sida Galaxy A01, terminal-ka ugu raqiisan shirkadda gabi ahaanba buugyaradeeda.
Galaxy A01 ayaa noqon doona kan ugu raqiisan buugga Samsung
Ka qaybgal xadka ugu aasaasiga ah iyo inay awoodaan inay soo bandhigaan wax soo saar karti leh xagga qiimaha iyo natiijooyinka waxqabadka aad iyo aad u adag. Kaliya waa inaad fiirisaa dukaan kasta si aad uhesho soojeedinno layaableh oo xiiso leh. A priori, Helitaanka taleefan xoogaa awood badan leh oo aan qaali ahayn ma adka. Waxyaabo kale ayaa ah sumcadda ka dambeysa shirkadda oo awood u leh inay na siiso badeecooyin noocaas ah.
Qaabka Samsung ee soo socda, Galaxy A01 wuxuu balan qaadayaa inuu ku noolaado waxa aan filan karno ee casriga ah ee kujira qiimaha laakiin karti u leh dhammaan dhinacyada. Waxay u muuqataa taas si loo yareeyo kharashka waxsoosaarka sida ugu macquulsan, sida horeyba loogu sameeyay nooc kale oo ka mid ah noocyada aasaasiga ah, waxaa qandaraas lagashay shirkad kale oo howsha gacanta ku haysa. Maanta sicirku kama gudbin taas oo aan ku heli karno, laakiin qaar ka mid ah qeexitaankiisa.
Samsung A01 ayaa soo bandhigi doonta a 16GB awoodda kaydinta iyo leh 2GB RAM. Sidoo kale ma hayno xog ku saabsan processor-ka uu yeelan doono. Laakiin haddii aan taas ogaanno shaashaddaadu waxay noqon doontaa 5,7 inji. Iyo in baytarigu yeelan doono awood 3.000 Mah. Sidaan arki karno, midkoodna ma ahan "astaamo" sare, laakiin waa wax ay iibsadayaasha noocaan oo kale ah ka warqabaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Galaxy A01, Samsung-dhamaadka-hoose waxay horey u leedahay magac
[Soo Degso APK] Firefox Lite 2.0 hadda waxaa laga heli karaa Android: hadda waxaa kujira isbarbardhig qiimo ah